Hongu, tinogona kupa zvinyorwa zvakawanda kusanganisira Zvitupa Zvekuongorora / Kubvumirana; Inishuwarenzi; Chibviro, uye mamwe magwaro ekuendesa kunze kwave kudiwa.
Ehe, isu tinogara tichishandisa yakakwira mhando yekutengesa kunze. Isu tinoshandisa zvakare hunyanzvi hwekutakura hutsi kurongedza zvinhu zvine njodzi uye zvinotenderwa zvinotonhora chengetedza vatakuri vekushisa zvinonwisa zvinhu. Nyanzvi kurongedza uye zvisiri-zvakajairika zvongedzo zvinodikanwa zvinogona kuunza imwe mubhadharo.